Dowladda oo ka haddashay Mooshinka Madaxweyne Farmaajo laga keenay – Radio Daljir
Dowladda oo ka haddashay Mooshinka Madaxweyne Farmaajo laga keenay
Diseenbar 14, 2018 4:45 b 0
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee ayaa markii u horeysay ka hadashay mooshinka kalsooni kala noqoshada ee laga keenay Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waraysi uu kaga hadlay mooshinka siiyay telefishinka dowladda ee SNTV,wuxuuna si qoto dheer uga hadlay mooshinka.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa mooshinka ku tilmaamay “Hal xaaraan ah’,wuxuuna intaas ku daray in aysan dhalaynin’nirig xalaal ah’,isagoona taas ku fasiray in markii hore ee mooshinka la qabtayba uu ahaa mid aan sax ahayn maadaama buu yiri laga been abuurtay Xildhibaano aanan saxiixin.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo isna xalay kasoo muuqday telefishinka Universal ayaa isna dhankiisa difaacay Madaxweyne Farmaajo.
Jawaabta xukuumadda ayaa timid xilli ay u egtahay in wadahadal lagu maareyn waayay khilaafka jira kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu ka guurey xarunta Villa Soomaaliya oo uu degenaa.
Guddoomiye Mursal waxa uu degey Hotel Shabeel oo ku dhegan Hotel Safari ,waxaana jirta in ciidamadii AMISOM ee illaalinayay aysan Guddoomiyaha raacin walow la sheegay in ay maanta ka dabo tagayaan.
Waraaq uu guddoomiyaha ku saxiixan yahay ayay shalay Xildhibaanada u qeybiyeen warbaahinta,waxaana warqadda lagu sheegay in mooshinka uu weli sidiisii yahay.
Xildhibaanada Madaxweynaha taageersan ayaa guddoomiyaha ku eedeeyay in uu degey xarun ay mucaaradka degenyihiin,balse weli guddoomiyaha lagama hayo wax hadal ah illaa iyo maalinkii uu qabtay mooshinka.
Ra’iisal Wasaare kuxigeenka Mahdi oo ka hadlayay guuritaanka guddoomiyaha ayaa sheegay in uu xor u yahay meesha uu degayo balse ay isaga la tahay in dayactir ka socday xarunta Villa Hargeysa darteed uu u guurey.
Mar wax laga weydiiyay eedeymo ay soo jeediyrem Xildhibaanada mooshinka wada oo ahayd in Guddoomiyaha loo diiday in ay u tagaan Xildhibaanada ayuu ku jawaabay in taasi aysan waxba ka jirin.
….. “Villa Soomaaliya waa xafiiskii madaxweynaha, waa hoygiisii, anaga oo dhan isaga ayaan marti ugu nahay, ciddii galaysana waa in ay martaa nidaamka xaqiijinta amniga, Ra’isulwasaaraha xitaa mararka qaar ayaa lagu celiyaa albaabka, aniga xitaa waa igu dhacdaa, waa arrin iska caadi ah” ayuu yiri.
Dawladda Qatar Oo Bilaabaysa Dhismaha Dekadda Hobyo (Video)